စက္ကူပိုက်ဆံအိတ် - ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်း Linux မှ
စက္ကူပိုက်ဆံအိတ် - ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုထုတ်လုပ်သည့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားအခါသမယတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာအမျိုးမျိုးသော application အမျိုးအစားများကိုဖြန့်ချိ၊ Crypto ပိုက်ဆံအိတ်ဒီနေ့ငါတို့ပြောကြမယ် «စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်»၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ သူတို့ကိုသုံးပါ open source ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ထွက်သယ်ဆောင်။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုပြီးလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် cryptocurrency လိပ်စာများနှင့် / သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာလိပ်စာများကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်သည် လက်လှမ်းမီသော့များ (အများနှင့်ပုဂ္ဂလိက) ၏ရန်ပုံငွေများရန် cryptocurrency အချို့တည်ရှိသည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chainပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုသုံးပြီး.
Crypto ပိုက်ဆံအိတ် - Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်: Linux တွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း
ဒီခေါင်းစဉ်ကိုအပြည့်အဝမလေ့လာခင်၊ ပုံမှန်အတိုင်း၊ ၊ ကျွန်ုပ်တို့မှအချို့သောစာရင်းများကို ကြိုတင်၍ အကြံပေးပါလိမ့်မည် သက်ဆိုင်သောယခင်ပို့စ်များ, သို့ delving စိတ်ဝင်စားသူတို့အား DeFi နယ်ပယ် ယခုလက်ရှိထုတ်ဝေမှုကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်သူတို့၏ဗဟုသုတကိုအလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်သည်။
"Crypto ပိုက်ဆံအိတ် (Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် / ဒီဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်) များသောအားဖြင့်အဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည် Blockchain ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ cryptocurrencies ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုသောတံတား။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ cryptocurrency တစ်ခုချင်းစီ၏ blockchain network မှတဆင့်လက်ခံခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို software နှင့် hardware လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ cryptocurrencies ၏ public keys နှင့် private keys များကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်စီမံရန်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။" Crypto ပိုက်ဆံအိတ် - Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်: Linux တွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း
Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် - Linux တွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအပိုင်း ၂
1 စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်: cryptocurrencies များအတွက်စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်
1.2 ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ကိုအသုံးပြု။ စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖန်တီးရန်အဘယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသနည်း
1.2.2 စက္ကူပိုက်ဆံအိတ် (Bitcoin.com)
စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်: cryptocurrencies များအတွက်စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်
အထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအယူအဆကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည် Crypto ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ်ပဲ Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်စပိန်လို။ အခုငါတို့ဘာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်မယ် "စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်".
"စက္ကူ၊ ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်အခြားအလားတူပစ္စည်းများစသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပုံနှိပ်သောပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုပါဝင်သော Cold Wallet သို့မဟုတ် Cold Wallet အမျိုးအစား။ Said Wallet တွင် blockchain သို့မဟုတ် Blockchain ပေါ်တွင်၎င်းတို့အတွင်း၌ရှိသော cryptocurrencies ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သီးသန့်သော့နှင့်လိပ်စာများပါရှိသည်။"
တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်ပါဝင်သည် QR ကုဒ်ကိုဒါကြောင့်ဟုပြောသည် သော့နှင့်လမ်းညွန် အကြောင်းကိုစာရွက်စာတမ်းနိုင်ပါတယ် scan ဖတ်ခြင်းနှင့်ဝင်ကြ၏ ပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုပုံ ကင်မရာ ကွန်ပျူတာ၊ လက်တော့သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းမှပင် cryptocurrency ATM တွင်သုံးသည်။
"Cold wallets ဆိုသည်မှာ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်ပြီး blockchain နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသောအင်တာနက်မှမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်မှထုတ်ပေးသောသော့များကိုအသုံးပြုသည်။ အအေးပိုက်ဆံအိတ်ဟုခေါ်သည်အဘယ်အရာသည်။ ၎င်းတို့သည်ငွေစုဘဏ်စာရင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့်ဤပိုက်ဆံအိတ်အမျိုးအစားသည်အခြားသူများအပေါ်ကြီးမားသောအားသာချက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်အတန်ကြာအသုံးမပြုနိုင်သောငွေစုကိုမည်သည့်နေရာတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်များစွာသော cryptocurrencies ပမာဏကိုသိုလှောင်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်နှင့်ထူးခြားသောလုံခြုံရေးအဆင့်ကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူများကအများဆုံးဖြစ်သည်။" Cold Wallets ဆိုတာဘာလဲ။
GitHub ရှိတရားဝင် site ကိုကြည့်ပါ
"သင်၏ Bitcoins ကိုအော့ဖ်လိုင်းသိမ်းဆည်းရန်ပျော်စရာကောင်း။ လုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။"
Este open source website ကတိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲ Bitcoin.com ဆာဗာများကထုတ်လုပ်ရန်လည်းခွင့်ပြုထားသည် စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်လုံခြုံပြီးထိရောက်သောအော့ဖ်လိုင်းအအေးသိုလှောင်ရန်။ သို့သော်သူသည်အမှန်တကယ်ကိုအသုံးပြုသည် key generator အခြေခံ Bitaddress.org တူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်။
"တစ်လောကလုံးပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် client-side ပိုက်ဆံအိတ်တည်ဆောက်။"
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Paper Wallets» ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလေးပါ စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်နှင့် open source အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသောအမျိုးမျိုးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ (စက္ကူ၊ ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်အခြား) အမျိုးမျိုးသော cryptocurrency လိပ်စာများနှင့် / သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာပုံနှိပ်ကိုင်ထားရန်အသုံးပြုခဲ့သည် လက်လှမ်းမီသော့များ (အများနှင့်ပုဂ္ဂလိက) ကြောင်း၏ရန်ပုံငွေမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး cryptocurrency အချို့တည်ရှိသည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » စက္ကူပိုက်ဆံအိတ် - ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုထုတ်လုပ်သည့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်
CentOS အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ရန်ကတိပေးသောနောက်ထပ် distro VzLinux
Fuchsia OS သည် Nest Hub ကိရိယာများသို့စတင်မိတ်ဆက်ပြီးပြီဖြစ်သည်